लकडाउनले गरायो कुची र क्यानभाससँग पुनर्मिलन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लकडाउनले गरायो कुची र क्यानभाससँग पुनर्मिलन
२०७७ पुष २४, शुक्रबार ०९:३७ गते
चित्र कोर्न व्यस्त कलाकार रामबाबु सुवेदी ।
भरतपुर । चित्रकला चट्टै छाडेका एक जना पुराना कलाकारलाई लकडाउनले कुची र क्यानभासस“ग पुनर्मिलन गराएको छ । रामबाबु सुवेदी चितवनका पुराना चित्रकार/कलाकार हुन् । तर, उनले चित्र कोर्न छाडेको २० वर्ष भएको थियो । लकडाउनपछि घरमै बस्दा उनले आफ्नो पुराना दिन सम्झे । पट्यारलाग्दो दिन कुची र क्यानभासस“ग बिताउन थाले । बनेका चित्र सामाजिक सञ्जालमा राखे । ती चित्र हेरेर मान्छेहरु दङ्ग परे !
‘बनाएका चित्र फेसबुकको भित्तोमा राखेको मान्छेले मन पराए । प्रतिक्रिया लेखे, लाइक गरे । यतिमात्रै हो र ? फोन नै गरेर लौ न हाम्रा लागि पनि चित्रहरु कोर्नू भन्न थाले’, सुवेदीले सुनाए । त्यसपछि उनले फेसबुकको भित्तोमा मात्रै नभएर घरको भित्तोमा नै राख्ने चित्र बनाउने निधो गरे । यसका लागि वाटर कलर नभएर तेलीय रङ्गमा कुची भिजाएर क्यानभासमा धर्सा दौडाउनुपर्छ । उनले यसै गर्न थाले ।
‘आयल कलरले क्यानभासमा चारवटा चित्र तयार गरिसकेँ । तीनवटा सुक्दैछन्, चार–पा“च जनाको अर्डर लिइसकेको छु’, साउनयताको बढ्दो व्यस्तताबारे सुवेदीले बताए । तीन हप्तामा दुईवटा चित्र तयार हुन्छ । एउटा चित्रको उनले ३० हजार रूपैया“सम्म लिने गरेका छन् । मान्छेले देखाएको चासो हेर्दा यो काम अगाडि जान्छ भन्नेमा उनी धेरै आशावादी छन् । आखिर यो सब लकडाउनले गर्दा नै भएको हो ।
उनले विसं २०५७ सालयता चित्र कोर्न छाडेका थिए । त्योभन्दा पहिला उनको मुख्य व्यवसाय नै यही थियो । कास्कीको हंसपुरमा २०२० सालमा जन्मेका सुवेदी पा“च वर्षको हु“दा चितवन आए । जान्ने हु“दादेखि नै चित्र कोर्ने गरेको उनलाई सम्झना छ । स्कुलमा कक्षा तीन पढ्दा राजारानीको चित्र बनाएर शिक्षकहरुले पुरस्कार नै दिएका थिए उनलाई । त्यसपछि विसं २०३५ सालमा उनी पोखरा लागे ।
पोखरा, महेन्द्रपुलमा बराल आर्ट थियो, जसका सञ्चालक थिए विष्णुप्रसाद बराल । बराललाई गुरू थापेर सुवेदीले आफ्नो कलालाई निखार्न थाले । त्यहा“ उनले तलब पनि पाउन थाले । यसलाई उनले व्यावसायिक जीवनको सुरूवात मानेका छन् । चित्र कोर्ने, साइन बोर्ड लेख्ने, ब्यानर बनाउने काममा निपूर्ण हँुदै गएपछि ४० सालमा उनी चितवन फर्के, लगत्तै दाङ पुगेर आर्ट पसल खोले । दुई वर्ष त्यहाँ बसेर चितवन आए ।
चितवनमा चित्र, ब्यानर, साइन बोर्डसँगै सिनेमाका ठूला–ठूला ब्यानर तयार गर्न थाले । गुरूसरहका गोविन्दराज विनोदी अनि भीम शर्मा, सुवर्ण प्रधानको साथ र सहयोगले उनी अगाडि बढ्दै गए । ०५३ सालमा नारायणगढमा आफ्नै नवरङ्ग आर्ट ग्यालरी खोले । त्यही बेला चितवनमा पत्रपत्रिका निस्कन सुरू भयो । पत्रिकाले कार्टुन माग्न थालेपछि उनी त्यो काम पनि गर्न थाले ।
कार्टुृनबाट कमाइ राम्रो थिएन, तर यसले पत्रकारिताप्रति उनलाई आकर्षित ग¥यो । उनी तालिमहरु लिएर समाचार लेख्ने शैली पनि सिक्न थाले । ०५३ सालदेखि स्थानीय पारदर्शी पत्रिकामा काम गर्न थाले । बिस्तारै समाचारस“ग संगत बढ्यो, चित्रकारितातिर लगाव कम हुँदै गयो । ‘व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्यो । प्रिन्टिङ र फ्लेक्सको जमाना आयो’, सुवेदीले त्यो बेलाको अरूचिबारे खुलाए ।
उनले ५७ सालपछि आफ्नो ‘नवरङ्ग आर्ट’ बन्द गरे । पत्रिकामा व्यस्त हुँदै गएपछि चित्र कोर्ने रहर कम भयो । साथीहरुले उनलाई हौस्याउन नछाडेका हैनन्, तर उनले त्यतातिर हेर्न नै छाडे । गएको चैत्र ११ देखि लकडाउन भयो । पत्रिकाको कामदेखि फुर्सद मिल्यो । बाहिर पनि निस्कन नपाउने गरेर घरमै बस्नुपर्ने भयो । यो बेला मन छटपटियो, अनि उनले कुची र रङ्गहरु सम्झे । पुराना रङ्गहरु रहेछन्, ब्रस पनि रहेछन् ।
पानी रङ्गले कागजमा ससाना चित्र कोर्दै फेसबुकमा राख्न थालेपछि आउने प्रतिक्रियाले उनी हौसिए । पुराना साथी भीम शर्माले रङ्ग र ब्रस नै पठाइदिए । काठमाडौँबाट कलाकार दीपक गौतमले पनि रङ्ग पठाइदिए । लकडाउनका बेला बनाएका ४०/५० वटा पानी रङ्गका चित्रले उनलाई पुरानै व्यवसायमा फर्काउन मद्दत ग¥यो । धेरै समयपछि ब्रस चलाउँदा केही गाह्रो नभएको हैन, तर लय समाउन गाह्रो भएन । अहिले फेसबुकमा ग्यालरी खोलिसकेका सुवेदीले कुनै दिन आफ्नै ग्यालरी खोल्ने चाहना व्यक्त गरे । सुवेदी ०६४ सालदेखि चितवन पोष्ट दैनिकसँग आवद्ध छन् ।
चितवनका थारु समुदायले आज खिचरा उत्सव मनाउँदै
चितवन फोटोग्राफी संघको साधारण सभा